London UK: Hooyo Soomaaliyeed oo Gabadheeda dishay, meydkeedana ku shubtay Aashito. | KEYDMEDIA ONLINE
Hooyadaan oo lagu magacaabao Iimaan Cumar Yuusuf, ayaa degan Erdington, Birmingham, iyadoo lagu hayo dilka gabadheeda 3-sanno jirka aheyd oo lagu magacaabi jiray Caaliya Axmed Jaamac.
Saraakiisha Booliska magaalada Birmingham ee dalka UK ayaa sheegay inay Iimaan Cumar Yuusuf dilka gabadheeda 3-sanno jirka aheyd u adeegsatay Mindi oo ay meelo badan ka galisay jirkeeda taasina ay keentay inay gabadha yar si degdeg ah u geeriyooto.
Booliska waxey warbixinta ay soo saareen raaciyeen inay Hooyo Iimaan Cumar Yuusuf, kadib marka ay dishay gabadheeda 3-sanno jirka aheyd ay Meydkeeda ku shubtay Aashito ama Acid si uu u baaba’o.
Dilkaan foosha xun ayaa dhacay bishii February ee sannadkaan, iyadoo ilaa xiligaasi Hooyo Iimaan Cumar Yuusuf lagu hayay Xabsiga, kadib markii Xaakim Justice Flaux uu sheegay inaysan Dad u joogin hooyadaan UK, ilaa laga helo dadkeedana lasii hayn doono.
“Arintaan waxey nagu noqotay fajac iyo amakaak, runtiina waxaan sameyno ma garaneyno, waxaana is weydiineynaa inay Hooyadaan si ula kac ah u dishay gabadheeda iyo waxa ku kalifay oo aan baaritaan ku hayno” ayuu yiri Xaakim Justice Flaux.
Ugu dambeyntii, Xaakim Justice Flaux waxuu sheegay inay sii socon doonto dhageysiga dacwada Hooyo Iimaan Cumar Yuusuf ilaa cadeymo badan laga helo lana Xukumo.